Displaying 81-90 of 194 results.
अब गृहमन्त्रीलाई पनि बुलेटप्रुफ मर्सिडिज बेन्ज गाडी
काठमाडौं, १० फाल्गनु । नेपाललाई कतारले दिएका नौवटा बुलेट प्रुफ मर्सिडिज बेन्ज गाडीमध्ये एउटा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने भएका छन् । उपहारस्वरूप दिएको ती गाडीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरी पठाइदिएपछि अबदेखि गृहमन्त्री.. .. ..
खेल मिलेमतो लगायतका सात कसुरमा आजीवन कैद
काठमाडौं, १० फाल्गुन । फौजदारी विधिशास्त्रका नवीनतम पक्ष समेटेर मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकमध्ये फौजदारी संहिता संसद्को विधायन समितिले पारित गरेको छ । समितिले फौजदारी सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँचमध्ये चार विध.. .. ..
निर्वाचन घोषणासँगै गृह प्रशासनले सुरु गर्‍यो सुरक्षा तयारी
काठमाडौं, १० फाल्गुन । सरकारले ३१ वैशाख ०७४ का लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । अबको ८२ दिनमा देशभर एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा भएको हो । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा तयारी थालेको खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।
लहानका डिएसपी केसीलाई सम्मानसहित बिदाई, नयां जिम्मेवारीमा पाण्डे
लहान, ९ फाल्गुन । मानब अधिकार संरक्षणा र प्रबद्र्धनमा सक्रिय भुमिका निर्वाह गरेको भन्दै मानवअधिकार संरक्षण केन्द्र (संजाल) सिरहाले प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार केसीलाई सोमबार लहानमा सम्मानसहित बिदाई गरिएको छ ।
सिरहामा ट्याक्टर बाँधबाट तल खस्दा चालकको मृत्यू
सिरहा, ९ फाल्गुन । सिरहाको मिर्चैया ३ मा ट्याक्टर बाँधबाट तल खस्दा एक यूवकको मृत्यूभएको छ । मृत्यू हुनेमा ट्याक्टर चालक धनुषा बलुवा ४ का १८ वर्षिय रुपेश यादव छन् ।
खोलामा बालुवा लिन गएको ज. १ त. ८९५६ नम्बरको ट्याक्टर बाँधबाट अन्दाजी बिस फिट तल खसेको
टिपरको ठक्करबाट झापामा पैदलयात्री महिलाको मृत्यु
झापा, ९ फाल्गुन । झापाको डाँगीबारी ८ बिहिबारे बजारमा टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्री महिलाको ज्यान गएको छ । मृत्यु हुनेमा डाँगीबारी ८ बस्ने अन्दाजी ६७ वर्षिया सन्तकुमारी राई रहेकी छन् ।
डाँगीबारी ८ बिहिबारे बजारमा अस्थायी नम्बर ना.अ.प.पौ. ८८४ लेखिएको
लालपुर्जा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने माग राख्दै मुसहर समुदाय आन्दोलित
सप्तरी, ८ फाल्गुन । सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजमा आज मुसहर समुदायले प्रदर्शन गरेका छन् । देशभरीका मुसहर समुदायले वर्षौदेखि घर बनाई भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
महोत्तरी मन्दिरमा करेन्ट लाग्दा साहको मृत्यु
महोत्तरी, ८ फाल्गुन । महोत्तरीको गौशालामा अवस्थित जल्पामाई मन्दिरमा करेन्ट लाग्दा सर्लाही श्रीनगरका ३७ वर्षीय सुशील साहको मृत्यु भएको छ । आज बिहान सो मन्दिरको परिसरमा रहेको पिपलको रुखमा चढेर पात काट्ने समयमा उहाँको ११ हजार भोल्टेजको बिजुलीको तारबाट करेन्ट प्रव.. .. ..
बिभिन्न मुद्दाका फरार तीन अभियुक्त झापामा पक्राउ
झापा, ७ फाल्गुन । अदालतबाट कैद तथा जरिवाना सजाय भई फरार रहेका व्यक्तिहरु पक्राउ गर्ने सिलसिलामा प्रहरीले झापाका बिभिन्न स्थानबाट तीन जना फरार पक्राउ परेका छन ।
पक्राउ पर्नेमा सवारी ज्यान मुद्दाका झापा लखनपुर १ बस्ने कैलाश भन्ने केवलबहादुर कार्क
नेपालका राष्ट्रपतिलाई आक्रमण गरे १० बर्ष कैद, अपहरण गरे १५ बर्ष
काठमाडौं, ७ फाल्गुन । नेपालका राष्ट्रपति माथि आक्रमण गर्नेलाई १० बर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको फौजदारी कसुरसम्बन्धी विधेयकमा संसदको विधायन समितिले राष्ट्रपतिमाथि हुने आक्रमणकारीमाथि बेग्.. .. ..